Ojiji nke ihe oghere bu ihe ohuru na eweputa ohuru, ihe di iche iche eji ewu ulo abiawo nke oma. Amasị nke mabụbeghị ebelata kemgbe oge ochie. Marble nke oke ikuku na-achọ mma, dị ka ọrụ nka nke ihe okike na-aghọ, nwere ike ịgwakọta uwe niile nke ụlọndammana na, na-egosi dị ọcha na ọhụrụ na free si vulgarity mma.
Họrọ okwute ime mgbidi ntọala TV, nwere ike ịkwalite klaasị ụlọ obibi niile n'otu ntabi anya. E nwere usoro dị mfe ma na-aga were were pụta ìhè iji gosipụta echiche nke ndị isi ọchịchị, enwekwara veidị kaleidoscopic iji weta mmetụta dị ike.
Kichin na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ bụ isi ọkụ ọkụ nke mmadụ, ebe ọ bụla jupụtara na ezigbo ụtọ ụlọ. Na marble iji mebie ụdị ohere, ịkpụzi ọnọdụ iri nri na nke ịhụnanya, na-egosiwanye ejiji ndị ntorobịa, juputara n'ike.
Ọdịdị nke marble ahụ na ederede ọzọ na ala ọcha dị ka akara ink na-asọ asọ, nke dị ka ọka nke okike, na-eme marble na-enye ohere ohere a ụdị nke aesthetic mmetụta.
Bathroomlọ ịsa ahụ mabul, ndị ruru ebe anya ha zuru ezu na-efu ọnụ.
Nkume dị oke ọnụ na nke dara oke ọnụ nwere agwa anụ ahụ na akara oge ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọ mma ụlọ ka mma ị nwere ike ịhọrọ marble maka ime ụlọ mma.